ရွာဦးကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရွာဦးကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံ
Posted by kyawmonkhant on Nov 18, 2010 in News | 14 comments
ဟာသလေးတစ်ခုကို မျှဝေချင်လို့ပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဆွမ်းစားရင် အချက်ပေး တုန်း ဒါမှမဟုတ်ကြေးစည် ထိုးစည် ခေါင်းလောင်း ထိုးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ဆွမ်းစားချိန်ကိုသိအောင်လုပ်တဲ့ သဘောလို့ထင်ပါတယ်။ ခရီးသွားနေတဲ့ သံဃာတော်များလည်း ခေါင်းလောင်းသံကြားရင် ဆွမ်းအချိန်မီ ဘုဉ်းပေးနိုင်အောင် အချက်ပေးတဲ့သဘောပါ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ – ရွာတစ်ရွာမှာ အရက်မူးသမားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလူက မိုးလင်းကမိုးချုပ်အချိန်တိုင်း မူးနေတဲ့သူပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဆွမ်းစားတော့ ခေါင်းလောင်းထိုးပါတယ်။ အဲဒီအသံကြားရတဲ့ အမူးသမားက ဘာပြောလဲဆိုတော့ “ ဘုန်းကြီးများ ကြီးကျယ်လိုက်တာကွာ၊ သူများမစားချင်လို့ လှူလိုက်တဲ့ ချဉ်ဟင်းလေး၊ ငါးပိရည်လေး စားမှာများ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ခေါင်လောင်းတွေ ဘာတွေထိုးနေရသေးတယ်။ ငါတို့လိုများ မိန်းမက ဘေးမှာထိုင်ပြီး မောင်ရေ ဒါကတော့ ကြက်သား ကာလသားချက်လေး၊ ဒါကတော့ ပုဇွန်ဆီပြန်၊ ဒါကတော့ မောင်ကြိုက်လို့ချက်ထားတဲ့ ဟင်းချိုလေး လို့ ပြောမယ့် သူများ ရှိရင် ဆိုင်းဝိုင်းတောင်ငှါးလောက်တယ်ဗျား“ လို့ ပြောတယ်ဗျား။
မစားချင်လို့လှူတယ်ရှိပါ့မလား
(ခေါင်းလောင်းသံလို့ရေးတာ ဘယ်လိုလုပ် ၀ဆွဲက ပါသွားမှန်းမသိလိုက်ဘူး၊ တင်ပြီးပေါ်လာမှသိတော့တယ်၊ စာမှားရင် ဘယ်ကနေ ဘယ်လုံပြင်ရတယ်ဆိုတာ ကူညီကြပါအုံး)
(ခေါင်းလောင်းသံလို့ရေးတာ ဘယ်လိုလုပ် ၀ဆွဲက ပါသွားမှန်းမသိလိုက်ဘူး၊ တင်ပြီးပေါ်လာမှသိတော့တယ်၊ စာမှားရင် ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုပြင်ရတယ်ဆိုတာ ကူညီကြပါအုံး)
စာပြင်ဖို့ admin ထဲပြန်ဝင်ပါ
ပြီးရင်ဘယ် ဘက်မှာရှိတဲ့ post ထဲဝင်ပြီး ကိုယ်တင်
ကိုယ့် စာပြန်တက်လာရင် ညာဘက်မှာ edit လုပ်
ဘ ကတော့ဖြတ်လိုက်ပြီ ဓားနဲ့
ပြောပြတဲ့အတွက် အန်ကယ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ ဗော့ဒကာ တစ်လုံးပို့လိုက်ပြီ၊ ကျနော်မသောက်တော့ဘူး။ (တကယ်ကျေးဇူးတင်တာဗျ)
လှတောရွာသား အရက်မူးသမားနဲ့ တူပါရဲ့။
ဟုတ်ပ အမူးသမားတွေများ.. အဲ့လိုလျှောက်ပြောတက်တယ်… (ကိုယ်တွေ့.. အဟီး..) ကျွန်တော်က ရွာတဲ့နေ့နဲ့ မရွာတဲ့နေ့တွေမှာပဲသောက်တာ.. ကျန်တဲ့ အချိန်ဖြတ်တယ်.. အဟီး..
မူးလဲမူးတယ် ရူးလဲရူးတဲ့ တို့ကိုကြီးကျော် ~~post ထဲကတောက်ရူးကောင်
ကျွန်တော် ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းရှိစဉ် (၁၉၅၂)ခုနှစ်ထုတ် ပြစ်မှုသို့မဟုတ်မှုခင်းမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်ရီစရာ ဟာသတော့မဟုတ်ပေမဲ့ မှတ်သားစရာ ကောင်းတော့ကောင်းသောကြောင့် မှတ်မိသလောက်ထပ်ဆင့်တင်ပြချင်ပါတယ်၊ ရွာတစ်ရွာရဲ့ရွာဦးကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟာငယ်စဉ်ကထဲက အကျင့်သီလနှင့်ပြည့်စုံပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်လာခဲ့တာ ၀ါ(၃၀)တောင် ရခဲ့လို့တန်ခိုးကြီး နာမည်ကျော်ကြားခဲ့လို့ ပတ်ဝန်းကျင်
ကျေးရွာများကပင် လာရောက်ကြည်ညို ကိုယ်းကွယ်ကြရတယ်၊ ထိုဘုန်းကြီး ၏နေ့စဉ်ဆွမ်းဖုန်း အတွက်၎င်းရွာမှ ဘာသာတရားကိုအလွန်တရာ ကိုင်းရှိုင်းသော အပျိုကြီးတစ်ဦးသည် နေ့စဉ်ကုသိုလ်ယူ ဆွမ်းပို့လေ့ရှိပါတယ် တနေ့သောဥပုဒ်နေ့မှာ သူမဟာအာရုံဆွမ်းကပ်မည်ဆိုပြီး ဆွမ်းအမယ်စုံပြင်ဆင်ပြီး ခံတောင်းထဲထည့်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အစောကြီးထခေါင်းရွက်သွားတယ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲရောက်တော့ ဘုန်းကြီးကလည်း အဆင်သင့်ဘဲ ခါတိုင်းလိုဘဲ ဘုရာစဉ်အောက်မှာ တင်ပလင်ထိုင်စောင့်နေတာပေါ့ ဘုန်းကြီးရှေ့ရောက်တော့ အပျိုကြီးဆွမ်းတောင်းကိုချမယ် ဆိုပြီးခေါင်းပေါ်မှ ဆွမ်းတောင်းလှန်းအကိုင် ဒူကလေးအသာညွန့်ပြီး အရှေ့တလှမ်းအလှန်းမှာ သူမရဲ့ထမီစကို နင်းမိပြီး ထမီကွင်းလုံးကို ကျွတ်သွားတော့သူမရဲ့လက်တစ်ဖက်နှင့် ထမီအပေါ်စကိုလှမ်းဆွဲရင်လဲ ဆွမ်းတောင်းမှောက်ကျသွားမည်စိုးသဖြင့် သူမ၏အတွင်းပစ္စည်းကို ဘုန်းကြီးကို လှစ်ပြသလိုဖြစ်သွားသည့် အပြင်ဘုန်းကြီးလည်း မမြင်သင့် မမြင်အပ်မမြင်ဖူးသာအရာကို မြင်လိုက်ရတော့ ဓါတ်လိုက်သလိုလို ၊သွေးတက်သလို ခံစားမှုတွေကိုခံစားနေရသည်မှ သတိဝင်လာကာ၊ထမီကိုကိုင်ပြီး ၀တ်ပေးရင်လည်း ကံသင့်မည်သူ၏ သင်္ကံန်းနှင့် ပါတ်ပေးရင်လည်း ၀ဋ်ကြီးမည်ဖြစ်သဖြင့် တကာမအား (ဟဲ့တကာမထိုင်လိုက်၊ထိုင်လိုက်) ဆိုပြီး ထိုင်ခိုင်းတယ် တကာမကလည်း ဘုန်းကြီးပြောသည့် အတိုင်းထိုင်ချလိုက်တယ် အဲ့ဒီထိုင်ချလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကို ဘုန်းကြီးက မြင်လိုက်ရတော့ ဘုန်းကြီးခမြာ ဗိုလ့်အားမြင့်တဲ့ ဓါတ်နှင့်အတို့ခံရသလိုရှိပြီး တစ်ကိုယ်လုံးလဲဖိန်းရှိန်းဖြစ်ပြီး အသံတွေလဲကတုန်ကရင်တွေဖြစ်ကာ၊ တကာမကိုပြန်ထခိုင်းလိုက်၊ ပြန်ထိုင်ခိုင်းလိုက်နှင့် နောက်ဆုံးတော့ဘုန်းကြီး ကိုယ်တိုင်မနေသာတော့ဘဲ တကာမရွက်ထားသော ဆွမ်းတောင်းကိုချလိုက်ရော ဘုရားစဉ် ကဖယာင်းတိုင်မီးလည်း လူသူတိတ်ဆိတ်သော အာရုံဦးအချိန်မှာငြိမ်းသွားခဲ့တော့ လောကလုံးဟာ ခေတ္တမှောင်မှိုက်သွားခဲ့ရတယ်ပေါ့ ရောင်ချည်ဦးလေးဝင်လာတဲ့အခါ မှာတော့ဘုန်းကြီးခမျာ သတိရလာပြီးသူ့ဘေးမှာ လျောင်းနေတဲ့တကာမကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အစထမီဘဲကျွတ်နေတဲ့ ဒကာမဟာ ယခုတော့တကိုယ်လုံး ဘာမှမရှိတော့တွေ့ရတော့မှ သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်မိတဲအခါ သူ့ကိုယ်မှသင်္ကံန်းဟာလဲ သူ့ချေရင်းအောက်မှာပင် ဒကာမ၏ ထမီဖြင့်လုံးထွေးနေသည်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ သူ၏နှုတ်မှ (ဗုဒ္ဓေါ) သာရွတ်နိုင်ပြီး ၊နောင်တကြီးစွာဖြင့် ချုံးချငိုကြွေးကာ အမှောင့်တကာ အမှောင်မှိုက်ဆုံးဖြစ်သော ကာမ
ကိလေသာတဏာ အမှောင်မှိုက်ထဲကျရောက်သွားခဲ့ရခြင်း ကိုခွင့်လွတ်ပါရန် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်၏ ခြေတော်ရင်းမှာ လက်နှစ်ဖြာ ရှက်ပြီး ဦးထိပ်မိုးကာ နောင်တကြီးစွာဖြင့် ၀န်ချကတော့တောင်းပန်ရှာပါတယ် ၊နောက်ရက်မှာဘဲ ရွာမှရွာသူကြီး၊ ရပ်ရွာလူကြီးတွေကိုခေါ်ယူကာ
မြို့တက်ပြီး ဂါတ်တဲကိုသွားအမှုဖွင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဂါတ်ဗိုလ်ကလည်း လူထွက်မလားမေးတော့လူမထွက်ချင်သည့် အတွက်သူ့အားသူ၏၀ါ (၃၀) ကိုချွတ်ကာ ကိုရင်ပြန်ပေးဝတ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဘုန်းကြီးလည်း တဒင်္ဂံအချိန်အတွင်းလေးမှာ ကိလေသာ တဏှာ ကာမ အမှောင်အမှိုက်ထဲ ကျရောက်သွားလို့နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောင့်လာခဲ့ရသော ၀ါ(၃၀) ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသည်ကို ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် ရှေ့တသက်တာ ကို ကိုရင်ဘ၀ဖြင့် ပြန်စခဲ့ရပါတော့တယ်… ကျွန်တော် ဘာသွားမြင်လဲဆိုတော့ ဟိုးအရင်က မြန်မာလူမျိုးများဟာ ကိုယ်လုပ်တာမှားရင်
မှားတယ် မှန်ရင်မှန်တယ်ဝံခံရဲကြတယ်.. ဥပဒေကို လည်းလေးစားကြတယ်.. ဥပဒေဟာ နိုင်ငံတော်အထက်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံကြတယ်.. ဥပဒေရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကို လည်းကျေကျေနပ်နပ် ခံယူကြတယ်.. ဒါဟာကမ္ဘာမှာ မြန်မာပြည်ကြီးသားဆိုတာပြတာဘဲ
ကွန်မန်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ရေးထားတာ ဖတ်မရလို့ အားလုံးလည်း ဖတ်ရအောင် အဖြတ်အတောက် လုပ်ပြီး ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်။
“ဘုန်းကြီးဝတ်လာခဲ့တာ ၀ါ (၃၀)တောင် ရခဲ့လို့” = more than (50) years old.
Interesting, How can it happen ???
Not much excited for just seeing the naked Lady.
May be, I have already donealot of nastiest (sex) things in my life.
ဟင် ဘယ်တွေရောက်ကုန်တာပါလိမ့်။မြန်ပြည်သားကြီး ကဒီဘက်ရောက်နေလို့ ပါ။မူးပြီးလမ်းမှားလာလေရော့သလား။
ဒီငမူးက ဒီဘ၀မှာတောင် မူးရူးနေတာ ဘုန်းကြီးကိုများ စားဦးစားဖျားလှူတာကို ငရဲကြီး ၈ ထပ်သွားချင်ပြီနဲ့တူတယ်….